Rita, Writing for My Sake!: Potential, ကိုယ် နှင့် စာသင်ခြင်း
Posted by Rita at 8/16/2009 11:21:00 PM
ရီတာကလူကြီးဆန်ပြီးသားပါ။ လူမမြင်ရခင်တုန်းက အရေးအသား အပြောအဆိုကြည့်ပြီး အသက် လေးဆယ်ကျော်တောင်ထင်ခဲ့မိသေးတယ်။ ဓာက်ပုံသေချာကြည့်လိုက်တော့မှ ငယ်သေးပါလားဆိုတာသိခဲ့ရတယ်
အောက်မှာရေးတာတွေဆက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။ ကလေးတွေ အကြောင်းတော့သိပ်မသိပါ။ ကိုယ်အငယ်တုန်းက သိခဲ့တာကတော့ အတန်းထဲမှာ အဆင့် ၁ ,၂ ,၃ ရ ရမယ်။ ကြီးရင်ဆရာဝန်လုပ်ရမယ် အဲဒါပဲစွဲနေခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက အမြင်တော်တော်ကျဉ်းခဲ့မှန်းအခုမှပိုပိုသိလာတယ်။ ကလေးဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှူဆိုတာ သိပ်မမှတ်မိသလိုပဲ။ အခုမှအဲလို ပျော်ရွှင်မှူတွေရှာရအောင်ကလဲ တော်တော်ပင်ပန်းမဲ့ပုံပဲ။
ဟုတ်တယ်...စာတွေ ကျက်... စာမေးပွဲမှာ ချရေး...နောက်တော့ မေ့ပစ်... ၊ မကောင်းဘူး...။ ခုလုပ်နေရတဲ့ အလုပ်နဲ့ သင်ခဲ့ရတဲ့စာ ဆက်စပ်မှုတော့ ရှိပါရဲ့ ဒါပေမယ့် % သိပ်နည်းတာပဲ..။
...ထိုင်စားနေလို့ရလဲ အပြင်မှာ မဖြစ်မနေ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမ...
နိုင်ငံဂျားမှာမွေးတဲ့ သားတွေကတော့ နယ်ကသူ့အဖေလောက်မတော်ရင်တောင် ရန်ကုန်သူအမထက်တော့တော်ကြမှာပါ...
ဒီပို့စ်လေးရဲ့နောက်မှာ စေတနာတွေ အများကြီး ပါနေတာခံစားမိပေမဲ့ မှီသလောက် ဖမ်းယူမန့်လိုက်တယ်နော်..
ရွှေသွေးလိုမျိုး စာစောင်ဆိုတာ မိုးသောက်ပန်းကိုပြောတာလား ။
ဟုတ်ဘူး။ နောက်ပိုင်း 2003/4 လောက်ကမှ ထွက်တဲ့ စာစောင်။ နာမည် မမှတ်မိတော့ဘူး။ ရွှေသွေးလို size နဲ့။ :)
အမစာထဲမှာ ဦးတည်ချက်နဲ့ စေတနာကို တွေ့နေရသားပဲ အမရဲ့ ဘယ့်နှယ့်ဘာကိုဦးတည်ရေးမှန်းမသိ ဖြစ်ရမှာတုန်း...
ငယ်ငယ်က ဆရာမက အဘွားအရွယ်လောက်ရှိမယ် .. ငသတ်က ဒီလိုရေးရတယ် .. ၀လုံးက ဒီဘက်ကဆွဲရတာဆိုပီး အော်လည်းအော် မှားရေးရင် လက်ကိုပေတံလေးနဲ့ရိုက် ..ခုလက်ရေးမဆိုးတာ အဘွားတင်ကြောင့်လို့ ကျေးဇူးတင်ရသေးတော့....
လူတိုင်းမှ သူတို့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကိုယ်စီ ရှိတယ်လေ.. အထင်သေးလို့မရဘူးးး
ကိုယ်လုပ်နီုင်တာ သူမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာ သူလုပ်နိုင်တယ်လေ..
အမလဲ ၈တန်းတယောက်ကို သင်ဖူးတယ် တီတီစီကပဲ
17 Aug 09, 01:11
NT: justareminder, not parking, should be "packing"
NT: Sorry for2msg, wrong "Enter". not blar blar, it's blah blah. Take care
ဆရာဉာဏ်ထွန်း ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပြင်လိုက်ပါပြီ။
ငါမရှိ၊ ငါမသိ၊ ငါ၏ ငါ့အမှားမျာူးု....
ငါသိပ်မသိသော (ငါ့ရဲ့ နောက်တစ်ယောက်က..)
ငါနားမလည်သော (ငါ့ရဲ့ ဒဿက...)
(ငါ့ကို ငါက ရှုံ့ ချ၊ ငါ့ကို ငါပဲအားကျ)
ငါပျေက်နေဆဲ (ငါ့ရဲ့ အနီးဆုံးက...)
ငါလိုက်ရှာဆဲ (ငါ့ရဲ့ အဝေးဆုံးက...)
ငါနဲ့ ငါကြား ဗျာများနေဆဲငါ....”
ဘာပြောချင်မှန်းမသိဘူး ဘာဘူးနဲ့ အဲဒါ ကိုလူထွေးကြီးကို စောင်းပြောတာ...
ရန်ကုန်မှာနေပြီး တုံးတာ အပြစ်တဲ့...